ရန်ကုန်-မန္တလေး ခရီးစဉ် သင်္ကြန်အထူး ရထားများ တိုးချဲ့ပြေး ဆွဲမည် - Yangon Media Group
ရန်ကုန်-မန္တလေး ခရီးစဉ် သင်္ကြန်အထူး ရထားများ တိုးချဲ့ပြေး ဆွဲမည်
ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၀
ရန်ကုန်-မန္တလေး ခရီးစဉ်အတွက် သင်္ကြန်မတိုင်မီ ငါးရက်နှင့် သင်္ကြန်ပြီးငါးရက်တို့တွင် အထူးရထားများပြေးဆွဲပေးမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းကာလများတွင် ပုံမှန်ပြေးဆွဲနေသည့် ရထားများအပြင် အထူးရထားများကို တိုးမြှင့်ပြေးဆွဲပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းမြန်မာ့မီးရထားလုပ်ငန်း တိုင်းအမှတ်(၇)မှ သိရသည်။သင်္ကြန်မတိုင်ခင်ကာလများနှင့် သင်္ကြန်ပြီး ကာလများတွင် ရန်ကုန်- မန္တလေးခရီးသည် များပြားခြင်းကြောင့် အထူးရထားတွဲများ ပြေးဆွဲပေး ရန်စီစဉ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့မီးရထားလုပ်ငန်းတိုင်းအမှတ်(၇)မှ မန်နေဂျာဦးဇော်လွင်က မတ် ၁၀ ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
“ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းပိုင်းက သင်္ကြန်မတိုင်ခင်ကာလနဲ့ သင်္ကြန် ပြီးကာလတွေမှာ ခရီးသည်အရမ်းများတယ်။ ခရီးသည်တွေ အဆင်ပြေစေ ဖို့အတွက် အထူးရထားတွေပြေးဆွဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက် ပြေးဆွဲပေးမယ်ဆိုတာတော့ စက်ခေါင်းရရှိမှုအပေါ်မူတည်ပြီး ဆောင်ရွက်မယ်”ဟု ၎င်းင်းက ပြောသည်။ သင်္ကြန်ပွဲတော်ကျင်းပနေသည့်ကာလအတွင်း ရန်ကုန်-မန္တလေး၊ ရန်ကုန်-မော်လမြိုင်၊ ရန်ကုန်-နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်-ပြည်၊ ရန်ကုန်-ပဲခူး၊ ရန်ကုန်-ဥက္ကံ အမြန်ရထားခရီးစဉ်များမှ ရထားအချို့ပြေးဆွဲမှု ရပ်နားထားမည်ဖြစ်ပြီး ဧပြီ ၁၇ ရက် (နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့)တွင်မူ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်ပြေးဆွဲပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းပိုင်းတွင် နေ့စဉ်အစုန်အဆန်ရထားစင်းရေ စုစုပေါင်း ၁၄ စင်းရှိသည့်အနက် ရန်ကုန်-မန္တလေးသို့ နေ့စဉ် ရထားစင်းရေ ရှစ်စင်းဖြင့် အစုန်အဆန်ပြေးဆွဲပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါအထူးရထားများအတွက် လက်မှတ်ခမှာ ပုံမှန်ရထားလက် မှတ်ခနှုန်းထားများအတိုင်းသာဖြစ်ပြီး သုံးရက်ကြိုတင်ကာ ရထားလက်မှတ်များ ဝယ်ယူခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သင်္ကြန်ကာလအတွင်း ရန်ကုန် -မန္တလေးသို့ပြန်မည့် ဦးဇင်မင်းထိုက်က”နယ်ကနေ ရန်ကုန်ကို အလုပ်လာလုပ်တာဆိုတော့ သင်္ကြန်ပိတ် ရက်လေးတော့ ပြန်ချင်တယ်။ လက်မှတ်တွေ ကြိုပြင်ဆင်ရတာပေါ့။ တစ်ခါတလေ သုံးရက်ကြိုဝယ်ရင်တောင်ကိုယ်ပြန်မယ့်ရက်အတွက် ထိုင်ခုံမရတော့တာတွေရှိတယ်”ဟု ပြောသည်။ယင်းကဲ့သို့ လက်မှတ်ခနှုန်းထားများအား ကြိုတင်ဝယ်ယူရာတွင် နှုန်းထားများကို ပိုမိုတောင်းယူလျှင် တိုင်ကြားနိုင်ပြီး ပိုတောင်း မှုများကို အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ရန်ကုန်-မန္တလေးခရီးစဉ်အတွက် ရိုးရိုးလက်မှတ်တစ်စောင်လျှင် ကျပ် ၄၆၅၀၊ အထက်တန်းလက်မှတ် တစ်စောင်လျှင်ကျပ် ၉၃၀၀ နှင့် အိပ်စင်တွဲအတွက် လက်မှတ်တစ်စောင်လျှင်ကျပ်၁၂၇၀၀ ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့မီးရထားလုပ်ငန်းမှသိရသည်။
မြန်မာ့လယ်ယာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကို အသွင်သစ်၊ ဝန်ဆောင်မှုပုံစံ အသစ်ဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးသ?
''နှစ်ရှည်လများ ဒါရိုက်တာ အနေနဲ့ ရပ်တည်နေကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကို တကယ်ကို လေးစားတယ်'' သရုပ်ဆော?
ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရမှု စစ်ဆေးခြင်းသည် အချိန်ကြာလွန်းသဖြင့် ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ထဲတွင်ပင် ပါဝင်နြေ?
BIG BANG က ယူကျု၏ ကြည့်ရှုသူ အများဆုံး စာရင်းဝင် ဒိုင်းမွန်း ပလေးဘာတွန် ရရှိ
နေရပ်စွန့် ပြန်လည်လက်ခံရေး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပေးပို့သော စာရင်းတွင် အကြမ်းဖက်မှု၌ ပါဝင်သူ ၁၆ဝ ကျေ?
ဂျနီဖာလောရန့်စ်၏ ဇာတ်ကောင်စရိုက်နှင့် တစ်သားတည်းဖြစ်စေရန် ပြောဆိုနေထိုင်မှုများက သူငယ်ချ??